XOG: Heshiis laga gaaray doodii ka taagneed dhismaha HirShabeelle - Awdinle Online
XOG: Heshiis laga gaaray doodii ka taagneed dhismaha HirShabeelle
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ku guuleestay in xal loo helo tabasho ay qabeen mid kamid ah beelaha daga gobalka Hiiraan, taas oo ku saabsaneed dhismaha HirShabeelle.
Xubno kamid ah baarlamaanka Soomaaliya, masuuliyiin ka tirsan HirShabeelle iyo duubabka dhaqanka HirShabeelle, ayaa ii sheegay in lagu heshiiyay, in madaxweynaha cusub ka yimaado Sh/dhexe markii laga gudbo doorashada Madaxtooyada, sidoo kalane la dhiso Xukuumad cusub, kadib baarlamaanka la horgeeyo mooshin Caasimada loogu wareejinayo Hiiraan.
Shacabka reer Hiiraan ayaa aqbalay in Caasimada halkaas loo wareejiyo, sidoo kalane afartii sanaba mar Madaxweyne helaan, halka dhaqanka kale ee Sh/dhexe ku qanceen sidaas oo kale.
Maalmaha soo socdo ayaa la filayaa in la shaaciyo jadwalka doorashada Madaxweynaha cusub ee HirShabeelle, iyadoo sidoo kale la filayo in musharaxiin cusub tartanka ku soo biiraan.
Previous articleGalmudug oo War kasoo saartay dagaalka ka dhacay Gobolka Galgaduud
Next articleRaiisul Wasaare Rooble oo Magacaabay Guddi doorasho